UNGAYIBUKELA NJANI IJUST KAJUSTIN BIEBER E-UK KWICOMEDY CENTRAL-IRADIO TIMES - UKUZONWABISA
Ingxoxo kaJustin Bieber ikwiTV yaseBritane ngokuhlwa nje
U-Justin Bieber akaqhelekanga ukuba yinto ehlekisayo, kodwa ngeli xesha i-icon yaseCanada yase-Canada yacela ukuba: oneminyaka engama-21 ubudala ube ngumxholo weComedy Central Roast.
Kulabo abangawaziyo umxholo, kubandakanya ubuso obudumileyo bokwenza iziqhulo malunga nosaziwayo omnye otyunjiweyo kangangeeyure, ngelixa behleli apho bekhangeleka bengonwabanga. UPamela Anderson, uWilliam Shatner, uJoan Rivers, uDavid Hasselhoff, uDonald Trump, uCharlie Sheen noJames Franco bonke bangamaxhoba avumayo eComedy Central ngaphambili.
Ukujika kuka-Bieber esihlalweni esishushu wabona i-chart-topping, inkawu ephethe i-heartthrob iqhekezwa yabethwa nguJeff Ross, Hannibal Buress, Kevin Hart, Natasha Leggero, Snoop Dogg, Shaquille O'Neal, Will Ferrell no Martha Stewart, ngeziqhulo ngayo nantoni na nangayo yonke into evela kwintombi yakhe e-off-off u-Selena Gomez kunye neebrashi zakhe kunye nomthetho kwisimo sakhe njengomntu othiywe esidlangalaleni kunenkokheli yase-North Korea uKim Jong-un.
Ukuqhotsa kwafota kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kunye neziqwengana zomboniso ovuza kwi-Intanethi ngelo xesha, ngaphambi kokuba kudlalwe kwiComedy Central eMelika phezolo. Kodwa abalandeli baseBritane beBieber - okanye abo bangenanto kwindawo yokuthotywa esidlangalaleni - abanakulinda ixesha elide leeyure ezimbini ezizodwa ukuba bafike kunxweme lwethu. Roast kaJustin Bieber uyasasaza ngokuhlwanje ngo-10pm kwiComedy Central
Nantsi inyuselo ene-popstar ehamba egged. Yonwabele.
Ikati kaJustin Bieber kunye nezinye izilwanyana ezintlanu ezidumileyo kwi-Twitter
UJustin Bieber wagxeka uphicotho-zincwadi lwe-X Factor
Ukuziphatha okumangalisayo kukaJustin Bieber-ixesha elifanelekileyo
inkwenkwe ephezulu yexesha le-4 lokukhululwa
lunini ugqatso lwef1 olulandelayo
madden nfl 22 umhla wokukhutshwa
uchungechunge lweTV oluphezulu lokubukela